PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-12-02 - ESKHALENI:
Ilanga langeSonto - 2018-12-02 - Ezemidlalo - MZWAMANDLA ZONDI
UKUQHUBEKA nokugoloza ukuphuma ehhovisi lekwazulu-natal Athletics (KZNA) kukaSello Mokoena ongumengameli omisiwe walo soseshini, kungase kufake isifundazwe engcupheni yokuba kumiswe yonke into ethinta ezokugijima kusona.
Uma i-athletic South Africa (ASA) ingathatha isinqumo sokumisa IKZNA yonkana, kuzoshayeka kakhulu abagijimi, kuphinde kuphazamiseke nayo yonke imijaho ehlelwa Kwazulu-natal. Phakathi kwemijaho ehlelwa lapha kukhona icomrades Marathon engenelwe ngabasubathi abangu-25 000, imandela Marathon, ispar Women’s Challenge ukubala nje embalwa.
Okwamanje I-ASA isamise ibhodi YEKZNA nje kuphela.
Njengoba I-ASA imise yonke ibhodi YEKZNA, ngokwami kufanele (amalungu ebhodi) akuhloniphe lokho, aphume ehhovisi, ayekele umlawuli ozimele, ujay Reddy, ukuba aqhubeke nomsebenzi ayalelwe ukuba awenze. Nokho ngolwesithathu umokoena uthumele umlayezo kwabezindaba nasemakilabhu angaphansi kwe- KZNA, othi uyaphikisana nokulethwa komlawuli ozimele esifundazweni.
Kule ncwadi ethunyelwe, ithi uma kukhona umuntu ofikayo ehhovisi uzokube engena ngokungemthetho kanti uzobizelwa amaphoyisa. I-KZNA isanda kulahlwa yicala ebilifake ngoLwesine olwedlule enkantolo enkulu yasegoli lapho ijaji livumelane NE-ASA ngokuba iqhubeke nokumisa isigungu esiphezulu SEKZNA. Kuyethusa ukuthi umokoena angathumela incwadi, athi IKZNA ibihlangene ekubeni emiswe wonke amalungu ebhodi. Lokhu asekwenza umokoena kubukeka sekufana nomuntu obambelela ngezidindi, omuka nomfula.
Amakilabhu uma ekwazi okuwalungele kufanele ayishaye indiva le ncwadi athunyelelwe yona ngolwesithathu kwazise kayiqhamuki esigungwini sekzNA asivotela ngo-2016. Phela ijaji ngeledlule likubeke kwacaca ukuthi njengoba ibhodi yekzNA imisiwe nje, kayisahlangene nokuqhubeka kwezokugijima esifundazweni okwenza le ncwadi ifane nento engekho.
Amandla wonke asekumlawu- li ofakwe YI-ASA, obekumele aqale ngomsombuluko kodwa okuthiwa kuze kube yimanje akakabonakali ehhovisi. Uma IKZNA ibiphethe ngokungenawo ugcobho, mayidedele I-ASA yenze uphenyo lwayo ngaphandle kokuphazamiseka kwezokugijima.
Ngaphandle komyalelo weASA, namakilabhu anawo amandla okuhlangana, aqonde ehhovisi ukuyokhipha bonke abasahleli khona ngokungekho emthethweni kwazise uma esonga izandla kuzoshayeka wona sekumiswa konke okuthinta ukugijima esifundazweni.
Kuzokhumbuleka ukuthi neASA ike yaba nesimo esifuze lesi lapho abagijimi baze bamashela emahhovisi ayo egoli ngenxa yokuthi izinto zazingahlelekile.
Amakilabhu esifundazwe mawasebenzisane NE-ASA aqonde ekings Park Athletics Stadium atshele abangafuni ukuphuma khona ukuba babuyele eceleni ukuze imijaho yabo iqhubeke. Okubuhlungu wukuthi kunabantu abaphila ngokugijima kanti uma izinto zinje zizoshaya bona uqobo.